बैठकमा बास्कोटाले गतिछाडा भनेपछि...
Homesamajikबैठकमा बास्कोटाले गतिछाडा भनेपछि...
Sundar 11:27 AM
जसरी पनि निकिता पौडेललाई पदच्युत गर्ने तयारी, स्पष्टिकरणको चिठी पठाइयो
काठमाडौं । आइतबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभागको चौमासिक रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने मन्त्रीसहितको बैठकमा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल अनुपस्थित थिइन् । त्यतिमात्र होइन, उनले चार महिनामा भएका प्रगति विवरण समेत पठाएकी थिइनन् । मन्त्रालयले उनलाई खबर गरेको थियो तर बेवास्ता गरिन् ।
भर्खरै सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसँग दोस्रो बिहे गरेकी पौडेल यतिबेला पतिसँगै व्यस्त भएको र बेवास्ता गरेको रिपोर्ट बैठकमा सुनाइयो । त्यसपछि कड्कीए मन्त्री बास्कोटा । पौडेललाई यसअघि बर्खास्त गरेका बास्कोटा यसै पनि रिसाएका थिए । अदालतमा पुगेर अन्तरिम आदेशसहित पदबहाली गरेकी पौडेलले विकास बोर्डका प्रगति विवरण तयार पारेकी छैनन् । उनी लामिछानेसँग कसैको बिहे पार्टी त कसैको ब्रतबन्धमा पुग्ने गरेको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पुगिरहेको थियो । यसैकारण पनि मन्त्री बास्कोटा रुष्ट थिए ।
मन्त्रीले सहसचिव राधिका अर्याललाई सोधे, ‘खबर थिएन ? अर्यालले खबर गरेको सुनाइन् । ‘उसोभए किन उहाँ आउनुभएन ? भर्खरै बिहे गरेर यति लामो हनिमुनमा गएको हो भने छुट्टी लिएको देखिन पर्छ । त्यो हैन भने स्पस्टिकरण सोधेर गोर्खापत्रमा जस्तै पदबाट हटाउन पर्छ ।’
मन्त्रीसमेत आउने बैठकमा बोर्ड अध्यक्षले देखाएको हर्कतबाट उनी रुष्ट थिए । त्यसो त मन्त्रीसँग निरन्तर प्रगतिका विषयमा कुराकानी हुनुपर्ने भए पनि उद्धव पौडेलपुत्रीले खासै चासो देखाएकी थिइनन् । उनी कार्यालय जाने र तलबभत्ता बुझ्ने भन्दा खासै काम पनि गरेकी छैनन् । बक्स अफिसको काम भएको भनी हौवा पिटिए पनि मन्त्री त्यसमा खुसी छैनन् । उनले बैठकमै थपे, ‘अदालत गए जान्छन् तर सधैं यसरी मनपरि गर्न पाउन्नन् ! बरु ताला लागे लागोस् यस्ता गतिछाडालाई राखेर बिकास बोर्ड उभो लाग्दैन !’